प्रदेशसभा सदस्यको मतगणना बिहान १० बजे पछी : बडीगाड- २ को अध्यक्षमा नेकपाका शेरचन बिजयी ! – ebaglung.com
प्रदेशसभा सदस्यको मतगणना बिहान १० बजे पछी : बडीगाड- २ को अध्यक्षमा नेकपाका शेरचन बिजयी !
२०७६ मंसिर १५, आईतवार ०७:५४	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
बागलुङ २०७६ मंसिर १५ । प्रदेशसभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनको मतदान शनिवार शान्तिपूर्ण सम्पन्न भएको छ । ‘ख’ प्रदेशका सबै मतदान केन्द्रहरुका मतपेटिकाहरु शनिवार नै बागलुङ सदरमुकाम ल्याईपुराईएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी विकासचन्द्र पौडेलले ईबागलुङलाई बताए । अहिले बिहान बैठक बसेर प्रदेशसभा सदस्यको मतगणनाको समय निश्चित गरिने बताउदै मतगणना सम्भवत: आज विहान १० बजे पछी सुरु हुने निर्वाचन अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रदेशसभाका लागी भएको मतदानमा ६१ प्रतिशत मतदान भएको थियो भने मतदानमा पुरुष भन्दा महिला मतदाताको संख्या बढी थियो । मतगणना जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (जिविस भवन) मा हुने निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यका उमेदवार जीत शेरचन र खिमबिक्रम शाही ।
प्रदेशसभा सदस्यमा राजनीति दलका ८ र २ जना स्वतन्त्र गरी १० जना उमेदवार चुनावी मैदानमा छन् जसमा एक जना स्वतन्त्र उमेदवारले बामगठबन्धनका उमेदवार समर्थनमा विज्ञप्ती निकालेर चुनावी मैदानबाट हटेको घोषणा गरेका थिए । तर उनका समर्थकहरुले उनको निर्वाचन चिन्हमा मतदान गर्न प्रचार गर्दै आएका थिए । प्रदेशसभा सदस्यमा बाम गठबन्धनका उमेदवार खिमविक्रम शाही र नेपाली काँग्रेसका उमेदवार जीतबहादुर शेरचन विचनै प्रतिष्पर्धा हुने विश्वास गरिएको छ ।
नेकपाका ढालेन्द्र शेरचन
बडीगाड गाउपालिका २ को वडाध्यक्ष पदको उपनिर्वाचनमा नेकपाका ढालेन्द्र शेरचन विजयी भएका छन् । उनले ७०४ मत प्राप्त गरेका थिए भने उनका निकटतम प्रतिव्दन्दी नेपाली काँग्रसका डिलबहादुर रानाले ४१२ मत प्राप्त गरेका थिए । समाजवादी पार्टीका उमेदवार हरिलाल रानाले जम्मा ६ मत प्राप्त गरेका थिए ।
देविस्थान मावि केन्द्रको एक मतपेटिका हराएपछी, बुर्तिवाङमा हंगामा !
अपडेट : ढोरपाटन-१ र निसीखोला-१ को मतगणना सकियो, काँग्रेस, बामगठबन्धन भन्दा ९ मतले अगाडी !